ဟန်ငြိမ်း ဦး တင်လိုက် တဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ “အေးမြဖြူ”(ရုပ်သံ) – အနုပညာရပ်ဝန်း
အနုပ ညာရှင် အတော် များများရဲ့ လျို့ဝှပ် တစ်ချို့ကို အမြဲ ထုတ်ဖော်သူ အမွှေစိန် ဟန်ငြိမ်းဦး ကတော့ မနေ့ကေ တာ့ အေးမြဖြူ နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ အကြောင်းတွေ ဖွင့်ချလာခဲ့ပါတယ်။
” အေးမြဖြူ လေး တောင် ဆို့အောက် ဖြစ်နေပြီ..သူ့ ငယ်သူ ငယ်ချင်းနဲ့ပဲ? ဒီတိုင်းေ လးပဲ ထားလို က်ပါအုံးမယ် ခလေးတွေက ငယ်သေးတော့ နားလည်ပေး လိုက်ပါနော်..။ သူ့အမကိုယ် တိုင်ကလည်း မ တင်ဖို့မေတ္တာရပ် ခံထားလိုပါ ..တွဲခဲ့တာမှန်ပေမယ့်.. ခုချိန်မှာ အနုပညာ ခရီးကို စိတ်ဖြောင့်ဖြော င့်လေးနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းချင် လို့ပါတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လိုပဲ ခင်တော့ မယ်တဲ့..။ အားလုံး please သူ့ထက် စိတ်ဝင်စရာသ တင်းတွေပဲ တင်ပေး မယ်နော်? ဆိုပြီး ဦဟန် ဆိုသည့် Page မှာ ယခုလို ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သတ် ပြီး ယနေ့မှာတော့ အေးမြဖြူဟာ “ အချစ်ရေးက Instock ပါ Sold မ Out ပါဘူး အမေက မနေ့ကတောင် ပြောနေတယ်…။ နင်နာမည် ပိုကြီးပြီပေါ့ တဲ့ မစိုး ရိမ်ကြပါနဲ့လို့ “…ဟန်ငြိမ်းဦး …..page က တင် လိုက်တဲ့ ချစ်သူရှိနေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သ က်ပြီး အင်တာဗျူးမှ ယခုလို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတ် ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပ င်ကျေးဇူးတ င်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များ မှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေး သွားကြပါအုံးနော်….
အချစ်ရေးက Instockပါ Sold မ Outပါဘူး အေးမြဖြူ
အချစ်ရေးက Instockပါ Sold မ Outပါဘူး အမေက မနေ့ကတောင် ပြောနေတယ် နင်နာမည်ပိုကြီးပြီးပေါ့တဲ့ မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ ……..pageတစ်ခုက တင်လိုက်တဲ့ ချစ်သူရှိနေပြီဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ အေးမြဖြူYoutube တွင်ကြည့်ရန် ….⤵⤵⤵ https://youtu.be/cAaU-tHhTGU Cele Connections#CC#Aye_Mya_Phyu#GNC
Posted by Cele Connections on Wednesday, August 12, 2020
” အေးမွဖွူ လေး တောငျ ဆို့အောကျ ဖွစျနပွေီ..သူ့ ငယျသူ ငယျခငြျးနဲ့ပဲ? ဒီတိုငျးေ လးပဲ ထားလို ကျပါအုံးမယျ ခလေးတှကေ ငယျသေးတော့ နားလညျပေး လိုကျပါနောျ..။ သူ့အမကိုယျ တိုငျကလညျး မ တငျဖို့မတေ်တာရပျ ခံထားလိုပါ ..တှဲခဲ့တာမှနျပမေယျ့.. ခုခြိနျမှာ အနုပညာ ခရီးကို စိတျဖွောငျ့ဖွော ငျ့လေးနဲ့ပဲ ဖွတျသနျးခငြျ လို့ပါတဲ့ မိတျဆှတှေေ လိုပဲ ခငျတော့ မယျတဲ့..။ အားလုံး please သူ့ထကျ စိတျဝငျစရာသ တငျးတှပေဲ တငျပေး မယျနောျ? ဆိုပွီး ဦဟနျ ဆိုသညျ့ Page မှာ ယခုလို ရေးသားထားပါတယျ။